Hlola iMonte Carlo, eMonaco - World Tourism Portal
Hlola iMonte Carlo, eMonaco
Amawebhusayithi ezokuvakasha asemthethweni weMonte Carlo
Bukela ividiyo ngoMonte Carlo
Hlola iMonte Carlo indawo yokuvakasha eyaziwayo e Monaco.
Isikhumulo sezindiza esiseduzane yiNice-Côte-d'Azur International, ebangeni elingamakhilomitha ayi-14 kude nesikhungo sasedolobheni endaweni eseduze France. Isebenza izindiza nsuku zonke emadolobheni amaningi amakhulu emhlabeni.
IMonte Carlo ngokwayo ifinyeleleka kalula yimingcele yomhlaba wayo evela eFrance noma Italy yenethiwekhi yemigwaqo emikhulu, esetshenziswa kakhulu kuyo yi-A8 egijima isuka entshonalanga isuka eMonte Carlo iye eNice kanye Marseilles. Ngokuthola okuthe xaxa, qasha imoto yemidlalo eguqukayo kusuka ezinsizeni eziningi eziqashisayo zezindiza bese usebenzisa umgwaqo omkhulu u-98, umgwaqo 'Basse Corniche' noma Umgwaqo Ophansi, ukubukwa okubabazekayo kuyo yonke iMedithera kanye I-French Riviera.
Kunabagibeli bomphakathi abayisikhombisa nabaphakanyiselwe phezulu (bonke bakhululekile) abasiza ukuxoxisana emithambekeni yedolobha.
Izinkampani ezihamba ngezimoto emhlabeni jikelele zinamahhovisi esikhumulweni sezindiza eNice naseMonte Carlo. Lokhu kufaka phakathi i-Avis, Gare Monte Carlo, i-Europcar neHertz - abashayeli kumele babe nelayisense lokushayela izwe okungenani unyaka owodwa kanti kuvame ukucelwa ukuthi izindleko zikhokhwe ngekhadi lesikweletu lokushayela. Ukushayela enkabeni yedolobha kungesabisa eMonte Carlo ngethrafikhi esindayo - noma kunjalo, kukufanele kaningi lokhu ukushayela eceleni kwezimoto ezibizayo edolobheni!
Kulula ukuzula eMonte Carlo naseMonaco uma uzinika isikhathi sokufunda lapho kukhona “ukusikeka okufushane” okuhlukahlukene. Amamephu wedolobha ngokuvamile atholakala kwizindawo eziningi ezidayisa abathengisi nezitolo ngemali encane.
Okuphelele 'okufanele kwenziwe' izivakashi ezintsha noma ezindala ngokufanayo ukuhamba olwandle u-Avenue Saint-Martin, kubandakanya ezinye izingadi ezinhle eziseceleni kwecala. Kulomgwaqo kukhona iMonaco Cathedral, eyakhiwa ngasekupheleni kwekhulu le-19th, futhi kulapho iPrince Grace kanye nePrince Ranier bashada khona. Kulapho uGrace namanye amaGrimaldis angcwatshwa khona.
IPalais du Prince (iSigodlo Senkosi) itholakala eMonaco-Ville yakudala futhi nayo kumele ibone. Ukushintshwa konogada kwenzeka nsuku zonke e-11: 55 am, ngakho-ke kungenzeka ufune ukubeka isikhathi sakho lapho. Kukhona izinkambo eziqondiswa esigodlweni usuku nosuku futhi zivame ukugijimela ubusuku nemini. Ngenkathi ulapho, qiniseka ukuthi uzinika isikhathi sokuhamba ubheke emachwebeni ngapha nangapha kwesigodlo - ukubuka kuyamangaza!
Ngenkathi ethekwini, kulula kakhulu ukumane ume umangele imikhumbi eminingi emikhulukazi yasolwandle nemikhumbi ehamba ngemikhumbi evame ukuhlobisa amachweba asemanzini. Kwesinye isikhathi, ngenkathi ngiphuza osebeni, kungenzeka ukuthi ubambe ongezansi kwabacebile nabadumile ngokumane baphumule emkhunjini wabo.
Uma ushiya ethekwini bese uya empumalanga, maduze uzohlangana neCasino de Paris (The Grand Casino) esePray du Casino, okuyingxenye enhle kakhulu yeMonte Carlo. Lapha, kufanelekile ukuvakashelwa ngaphakathi kwekhasino uqobo, noma ngabe uhlela ukungabhejeli - izakhiwo, imabula ekhazimulayo nemihlobiso yegolide ngaphakathi kumane kumangalisa. Ikhasino livula nsuku zonke ezivakashini ezisuka e-2 ihora bese ukungena kwi-antechamber ngaphandle kwekhasino uqobo kukhululekile, yize kusamele ube yi-18 ukungena. Kungenzeka futhi ukuthi; ngokumangazayo, vele ume ngaphandle futhi 'ubuke abantu' izivakashi eziza futhi zizolanda i-d'Paris ekhethekile kakhulu, amabanga nje ambalwa ukusuka emnyango wekhasino. Uma kungenjalo, abathanda imoto emndenini bangathokozela uhla olukhulu lwezimoto ezibizayo nezinamandla ezimiswe ngaphandle!
Yini okufanele uyenze eMonte Carlo, eMonaco
Uma isikhwama sakho semvume sikuvumela, zama inhlanhla yakho ku-Grand Casino nokugembula eceleni kwezicebi zomhlaba futhi ezivame kakhulu ukuduma. Uzodinga ipasipoti yakho ukuze ungene, kanye nemali yokungena ibanga kakhulu ngokuya ngokuthi uliphi igumbi. Ikhodi yokugqoka ngaphakathi ilukhuni ngokwedlulele - amadoda kudingeka ukuthi agqoke amajazi nezibopho, futhi izicathulo ezijwayelekile noma 'zethenisi' zenqatshelwe. Amakamelo wokudlala uqobo ayamangalisa, anengilazi enamabala, imidwebo, kanye nemifanekiso ebaziwe yonke indawo. Kukhona amanye amakhasino amanye amabili aseMelika eMonte Carlo. Kokubili kwalokhu kunemali yokuvuma, futhi ikhodi yokugqoka iyivelakancane.
Omunye umsebenzi ongafuna ukuzama ukuvakashela isifundo seGrand Prix - kuvame ukwenzeka ukuthola inkampani ekhethekile ohlangothini lweMarina ezokuvumela ukuthi uthathe uhambo lokuzungeza imigodi edumile nemikhawulo ye-hairpin Monaco inkambo kwimoto yokusebenza - imvamisa i-Ferrari noma i-Lamborghini, nokho, lokhu kuyabiza.
Uma ukhathele indlela yokuphila enhle kakhulu ne-show-off supercars (engeke yenzeke masinyane!) Ziningi ezinye izindlela zokusebenzisa isikhathi sakho eMonte Carlo. I-Oceanographic Museum ne-Aquarium ku-Avenue Saint-Martin iyinhlangano edume umhlaba wonke, kunezinhlanzi ezihlukene ezingaphezu kwe-4,000 kanye nemindeni ye-200 yama-invertebrates, enayo yonke into kusuka ekukhuleni okungajwayelekile kolwandle kuya kuma-piranhas abulalayo ngisho nakuthambo lomthambo we-66 whale, futhi kufanelekile ukuvakashelwa. Ukuze uphumule ngemuva kokukubona konke, isitezi esiphezulu semnyuziyamu siyikhaya laseLa Terrasse, indawo yokudlela enokubukwa okuhle kweRiviera.
Indlu ye-opera ebizwa nangokuthi "Salle Garnier" yakhiwa ngumakhi wezakhiwo odumile uCharles Garnier. Ihholo lendlu ye-opera lihlotshiswe ngombala obomvu negolide futhi linemidwebo neziqoshwe nxazonke zehholo. Uma ubheka phezulu ophahleni lwehholo, isivakashi siyoqhunyiswa imidwebo enhle kakhulu. Indlu ye-opera iyindida kodwa ngasikhathi sinye inhle kakhulu. Kuke kwaba neminye imisebenzi ephezulu kakhulu yamazwe omhlaba ye-ballet, opera namakhonsathi ebanjelwe endlini ye-opera isikhathi esingaphezu kwekhulu leminyaka. Uma ucabanga ukuthatha umbukiso phakathi nokuvakasha kwakho lindela ukukhokha ngaphezulu!
Ukuthenga eMonte Carlo kuvame ukukhetha okukhethekile futhi akuyona indawo yeholide lesabelomali. Kunezindawo eziningi zokuncibilikisa ikhadi lesikweletu eceleni kwama-roller aphezulu ase-Europe. Izitolo zezingubo ze-chic zikwi 'Golden Circle', ezenziwe ngo-Avenue Monte Carlo, Avenue des Beaux-Arts ne-Allees Lumieres, lapho iHermes, uChristian Dior, uGucci kanye noPrada bonke bekhona. Indawo ne-ndawo eyindawo i-Indawo du Casino iyikhaya labasebenza ubucwebe bokugcina abade njengeBulgari, Cartier neChopard. Uzothola, noma kunjalo, ukuthi iningi labavakashi lizokujabulela ukuzulazula kuleyo ndawo nokuyothenga emafasiteleni, noma ngabe ungathengi lutho. Amahora ajwayelekile wokuthenga asuka ku-9: 00 kuya ntambama kanye ne-3: 00 kuya ku-7: 00 pm.
Ukuthatha okuthe xaxa okuthe xaxa ukuthenga eMonte Carlo, zama iMakethe yeCampamine. Imakethe, etholakala ku-Place d'Armes, ibikhona kusukela ku-1880 futhi inempilo futhi iyabukeka - amahora amaningi angachithwa ngokumane uzulazule, ukutholela izikhumbuzo ezitolo ezinkulu ezincane, izindawo zokuphumula kanye nezindawo ezinobungane. Kodwa-ke, uma unothenga izinto zokunambitheka zanamuhla, ukuhamba nje okufushane esplanade yiyona mhlobiso eyindilinga yezitolo i-Princess Princess.
IFontvieille Shopping Centre nayo iyisipiliyoni sokuthenga 'esijwayelekile' ngezitolo zakwa-36 ezithengisa izinto ze-elekthronikhi, ama-CD, ifenisha kanye nezingubo kanye nesitolo esikhulu seCarrefour. Ihhovisi lezivakashi libuye likhiphe umhlahlandlela wokuthenga wamahhala owusizo edolobheni.
Ukudla eMonte Carlo kungaba yinto emangalisa kakhulu kunoma ngubani okhokha imali ekhokhwayo. Mhlawumbe izindawo zokudlela ezikhethekile kakhulu nezidumile edolobheni yi-'Louis XV Restaurant 'kanye ne-'Le Grill de L'Hotel de Paris', yomabili igxile endaweni ekhethekile yeHhotela de Paris. Unamathuba amaningi okuhlala eduze kwelungu labacebile nabadumile, kanti ukudla okukudla okumnandi kumane nje kuphelile-kulokhu-kulomhlaba - kepha, lezi zipiliyoni ziza nethegi eliphakeme kakhulu lentengo!
Kulabo abafuna isidlo sasemini esiphumelelayo nesingakahleleki noma sakusihlwa, kunezinhlobonhlobo eziningi zokunye zokudlela nezindawo zokudlela zamahhala edolobheni ngethegi elincane lentengo nokudla okuhle. Kunamakhofi ambalwa alula ohlangothini lwe-marina-side, njengamabha asolwandle kunanoma yini enye, asebenzisa ukudla okulula okufana ne-pizza, amasaladi nama-hotdogs usuku lonke. Lokhu kungaba kuhle ngokuhlala nje emuva phakathi nobusuku obushisayo ubhiya obandayo noma ingilazi ye-wayini, umthamo wokufaka kabusha amabhethri akho ekuhloleni idolobha, kanye nokuthwebula kancane iMedithera (futhi imvamisa kubhonga kwezindlebe) ezindlebeni zakho. . Iningi lalezizindawo zokudlela libuye lihlome ngothayela abasebenza emanzini ophahleni bapholile futhi bavuselele ikhasimende.
Kwenye indawo phakathi kwalezi zipiliyoni ezimbili zokudlela kuza iCafé de Paris edume umhlaba wonke, ngaphandle nje kweCasino. Izivakashi nabantu bendawo ngokufanayo bangatholakala ntambama futhi ubusuku bonke bahleke, baphuze, badle ukudla okumnandi (kepha bevuma ukudla okubizayo). Impela kumele uhambe ngesikhathi uhlala eMonte Carlo, noma ngabe ufuna umthamo ntambama - kufanelekile.